Eliza ရဲ့ New Menu !!!!!! - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
အလှအပ Spa များ
ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု Gym များ
ကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်နိုင်သော Video များ
Eliza ရဲ့ New Menu !!!!!!
August 8, 2019 | by Eliza Skin Republic
Eliza ရဲ့ Menu အသစ်မှာ Treatment အသစ်၊ Step အသစ်တွေအပြင် အသုံးပြုတဲ့ Ingredient အသစ်တွေလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်နော်။
တစ်ခုချင်းစီကို သေချာကြည့်လို့ရအောင် Share ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲလေးတွေရှိပေမယ့် အသစ်တိုးပေးထားတဲ့ အဆင့်တွေလည်း အများကြီးရှိတဲ့အတွက် .. Step တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကို ပြောပြပေးပါမယ်နော်။
– သက်တောင့်သက်သာစေဖို့ Essential Oil ကိုအသုံးပြုပေးတဲ့ Aromatherapy အဆင့်လေး ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Customer တွေက အပြင်ကလာတဲ့အခါ၊ တနေကုန် အလုပ်လုပ်ထားရတဲ့အခါ တောင်းတင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေနဲ့ အာရုံကြောတွေကို Relax ဖြစ်စေပြီး သက်တောင့်သက်သာ အနားယူနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။
– အနွေးဓာတ်ကို အသုံးပြုတဲ့ Warming Massage Roller ကိုအသုံးပြုပေးမယ့် Massage Step လေးလည်း ထည့်ထားပါတယ်။ လက်နဲ့နှိပ်လို့ အဆင်မပြေတဲ့ မေးရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ လည်ပင်းတွေအတွက် Roller လေးအသုံးပြုပေးတဲ့အခါ ကြွက်သားတွေကို ညင်ညင်သာသာနဲ့ ထိရောက်မှုရှိစေပါတယ်။ အနွေးဓာတ်ကြောင့်လည်း အဆီပိုတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။
– Toner ကိုအသုံးပြုပြီး ချွေးပေါက်လေးတွေကို အားဖြည့်တင်းရင်းစေမယ့် Step ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် ချွေးပေါက်လေးတွေကျယ်မှာလည်း ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
– နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုပါ စိုပြေစေဖို့ ပျားရည်နဲ့ သကြားကို အသုံးပြုထားတဲ့ Lip Mask လေးကိုလည်း Mask အဆင့်မှာ အတူအသုံးပြုပေးမှာပါ။ Treatment လုပ်ပြီးတဲ့အခါ စိုပြေဝင်းပသွားမယ့် အသားအရည်အပြင် ချောမွေ့နေမယ့် နှုတ်ခမ်းလေးတစုံကိုပါ တွေ့ရမှာပါ။
– Acne-care Treatment လုပ်နေကြ Customer တွေအတွက် ဝက်ခြံတွေသက်သာသွားတဲ့အခါ Brightening ဖြစ်ချင်ကြတာရယ်၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ သက်သာစေဖို့ရယ်အတွက် Treatment အသစ်ဖြစ်တဲ့ Skin Radiance Facial Treatment ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
အဲဒါအပြင် Scrub အသစ်နှစ်မျိုးလည်း ရှိပါသေးတယ်နော်။ Organic လိမ္မော်သီးအဖတ်လေးတွေကို အသုံးပြုထားတဲ့ Orange Scrub ရယ်၊ စတော်ဘယ်ရီသီး အဖတ်လေးတွေကို အသုံးပြုထားတဲ့ Strawberry Scrub ရယ်လည်း ရှိပါသေးတယ်။
Check-in Promotion လည်းရှိတဲ့အတွက် Page မှာ သေချာစောင့်ကြည့်ပေးပါနော်။
အကာင်းမွန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှု အသက်သာဆုံး ဈေးနှုန်းတွေ နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ELIZA မှာ Facial Treatment ပုံမှန်လုပ်ရင်း အသားအရေလှပဖို့အတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံကြစို့နော်။
Eliza ( Yangon )
လိပ်စာ – အမှတ် (၄၀)၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
Hotline – 09-444926276
Open Daily – 9:00 am – 10:00 pm
Eliza Chinatown Branch
လိပ်စာ – အမှတ် (၁၂၃)၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
Hotline – 09 402818297
Open Daily – 9:00 am – 9:00pm
Eliza ( Mandalay )
လိပ်စာ – အမှတ် ၂၅၇၊ ၃၃ လမ်း (၈၃ x ၈၄)၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
Hotline – 09 792777379
Open Daily – 9am – 9pm
July 10, 2019 | by Your Fitster Team
Gym ကစားခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲ
July 30, 2019 | by Your Fitster Team
တစ်ပတ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ခေါင်းလျှော်သင့်သလဲ?
အသက် (၄၀) အရွယ်မှာ (၁၀)နှစ်လောက်ပိုငယ်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ?
August 2, 2019 | by Your Fitster Team
ခြောက်သွေ.တဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေ တောက်ပြောင်လှပစေဖို့ အိမ်မှာပဲ အလွယ်တကူ ပေါင်းတင်ကြမယ်
မိန်းခလေးတွေရဲ့ ဘယ်လိုဆံပင်အရောင်က ယောကျာၤးလေးတွေအတွက် ပိုပြီးစွဲဆောင်မှုရှိစေသလဲ?
August 8, 2019 | by The Clinic De Novo Aesthetics
မခေါ်ဘဲ ရောက်ရောက်လာတတ်တဲ့ ဝက်ခြံ
August 8, 2019 | by YGN Health Spa
မိုးတွင်းမှာ ခြေချောင်းလေးတွေကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲ?
August 8, 2019 | by Beauty4u Aesthetic & Laser Clinic
ချိုင်းအောက်မှ မလိုလားသော အမွှေးအမျှင် ဖယ်ရှားခြင်းနည်းလမ်းများ၊ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ
Chemical Peeling ဆိုတာဘာလဲ?
သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ခန္တာကိုယ်က Smart ကျနေဖို့ဆိုရင်
August 9, 2019 | by Dr Glow Aesthetic & Beauty Clinic
အသားဖြူအောင် အသားအရေလှေ အာင် ဘယ်လိုနေကြမလဲ???
Vitamin C အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Moisturizer သုံးဖို့ ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲ ⁉️
August 9, 2019 | by Apple Beauty Center & Aesthetic Clinic
Slim Body လေးဖြစ်ချင်တယ်
August 9, 2019 | by Your Fitster Team
Plastic Surgery အတွက် သွားရောက် လည်ပတ်သင့်သော ကျော်ကြားသည့်နိုင်ငံ (၁၂)ခု
October 31, 2019 | by KING’s Dental Specialist Clinic & Imaging Center
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ သွားကျန်းမာရေး ဘယ်လိုဆက်စပ်နေလဲ?
November 7, 2019 | by Your Fitster
November 20, 2019 | by Your Fitness
December 2, 2019 | by Your Fitster Team
ပန်းပွင့်စိမ်း ( Broccoli ) ၏ကောင်းကျိုးများ
December 4, 2019 | by Your Fitster Team
ကိုယ်ဝန်သည်ဇနီးအပေါ်မှာ ဘယ်လိုဂရုစိုက်မှုတွေ ပေးသင့်သလဲ?
December 6, 2019 | by Your Fitster
အမြဲတမ်းအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ နေထိုင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)မျိုး
December 9, 2019 | by Your Fitster Team
Detox Water ၏ကောင်းကျိုးများ
December 10, 2019 | by Your Fitster Team
Cellulite (ဆယ်လူလိုက်)နှင့် ပတ်သက်ပြီးသင်သိသင့်သည့် အချက်များ
December 11, 2019 | by Your Fitster Team
အရည်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး ဝိတ်ချနည်းများ
December 12, 2019 | by Your Fitster Team
(Sugure Apple)သြဇာသီးစားခြင်းဖြင့် ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ
December 18, 2019 | by Your Fitster Team
December 19, 2019 | by Top Beauty Plastics Surgery Center
အဆီတွေ ဘာကြောင့် ချရခက်နေပါသလဲဆိုရင်?
December 20, 2019 | by Your Fitness
စိတ်ဖိစီးမှု ပျောက်ကင်းစေဖို့ စားသုံးသင့်သည့် အစားအစာများ
January 2, 2020 | by Your Fitster Team
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ရှိခြင်းက သင့် ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပေးသလဲ?
January 9, 2020 | by Your Fitster Team
January 13, 2020 | by Your Fitness
ရုံးပတီသီး၏ အံသြဖွယ် အကျိုးကျေးဇူးများ
January 24, 2020 | by Your Fitness
February 4, 2020 | by Your Fitness
Cronavirus (ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်) မှကာကွယ်ဖို့ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့်သလဲ
February 10, 2020 | by Your Fitness
ဝိတ်တက်ချင်သူများ လိုက်နာသင့်သည့် နည်းလမ်း (၁၀) မျိုး
February 13, 2020 | by Your Fitness
ဝိတ်ကျချင်သူများ လိုက်နာသင့်သည့်နည်းလမ်း (၁၀)မျိုး
May 15, 2020 | by Your FitSter Team
မျက်နှာဖောင်းခြင်းကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းများ
June 3, 2020 | by Your Fitness
July 29, 2019 | by Clean & Detox SPA
တစ်နေ့ ရေ ၂ ခါ ချိုးရုံနဲ့တော့ ပိုမလှနိုင်ပါဘူး
June 4, 2020 | by Your Fitness
June 5, 2020 | by Your Fitness
June 8, 2020 | by Your Fitness
June 18, 2020 | by Your Fitness
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပျမ်းမျှ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ကို သင်သိပါသလား ?
June 26, 2020 | by Your Fitness
Coronavirus သည် ရေ ထဲမှာနေနိုင်သလား?
Coronavirus သည် အစားအစာမှ ကူးစက်နိုင်သလား?
နို့တိုက်အရွယ်ကလေးရှိတဲ့မိခင်မှာ Coronavirus ရှိနေရင် ကလေးနို့တိုက်လို့အဆင်ပြေပါ့မလား?
နောက်ဆုံး ရှာဖွေတွေရှိချက်များအရ ” O ” သွေးအမျိုးအစားများဟာ COVID ဖြစ်နိုင်ချေပိုနည်းပြီး ” A ” သွေးအမျိုးအစားများဟာ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများတယ်ဟု အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရေခဲမုန့် အမြဲစားခြင်း၏ ကောင်းကျိုး နှင့် ဆိုးကျိုး
2006 နဲ့ 2016 မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မှု ဘာတွေကွဲပြားသွားလဲ?
May 13, 2020 | by Your Fitness
အိမ်မှာနေရင်း အသားအရေ ထိန်းသိမ်းကြမယ်
July 6, 2020 | by Your Fitness
July 8, 2020 | by Your Fitness
July 13, 2020 | by Your Fitness
သခမသီး (Rockmelon) စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူး (၁၀)မျို
ဖရုံသီး (Pumpkin) စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူး (၇)မျိုး
August 6, 2020 | by Your Fitness
သင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းက စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလဲ သင်တွေးမိပါသလား? ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အတွက် စွဲဆောင်မှု ရှိနေသလဲဆိုတာ…
August 25, 2020 | by Your Fitness
ယခင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက် ပိုမိုကူးစက်မြန်ဆန်တဲ့ Covid-19 ရောဂါပိုးအသစ်အကြောင်း
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာ (၁၀)မျိုး
2015 ခုနှစ်က အကောင်းဆုံး Makeup Brand ၁၀ မျိုး
August 6, 2019 | by Your Fitster Team
ကန်စွန်းဥကို အလွယ်တကူ လုပ်စားလို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေ
July 29, 2019 | by Apple Beauty Center & Aesthetic Clinic
ဝက်ခြံတွေကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့ Acne Treatment များ
January 10, 2020 | by Your Fitness
Zumba Dance (ဇွန်ဘာ) အကအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို သက်သာအောင် ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ?
အမျိုးသားများအတွက် အကောင်းဆုံးရေမွှေး (၃၁)မျိုး
January 16, 2020 | by Your Fitster Team
January 22, 2020 | by Your Fitness
အမျိုးသမီးများအတွက် အကောင်းဆုံး ရေမွှေး ၂၂ မျိုး
January 28, 2020 | by Your Fitness
နှစ် (၁၀၀)မှာ (၁)ခါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အံသြစရာ တိုက်ဆိုင်မှု ကပ်ဆိုး
January 17, 2020 | by Your Fitness
လှပတဲ့ ခြေတံလေးတွေ ရရှိဖို့
March 13, 2020 | by Your Fitster Team
ဂျိုင်း ဖြူစေဖို့နဲ့ အနံအသက်ပျောက်ဖို့ အာလူး သုံးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
March 18, 2020 | by Your Fitster Team
ကူးစက်ရောဂါများမှ ကာကွယ်ရန် ကိုယ်ခံအားကောင်းစေသော အစားအစာ (၁၅)မျိုး
March 20, 2020 | by Your Fitster Team
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ(Covid-19) နှင့်ပတ်သက်၍ အမေးများသော အမေးအဖြေများ
March 25, 2020 | by Your Fitness
May 19, 2020 | by Your Fitster Team
Covid-19 ကာလမှာစျေး၀ယ်ထွက်တဲ့အခါ လက်အိတ်ဝတ်သင့်သလား?
May 27, 2020 | by Your Fitster Team
ကိုယ်၀န်သည်တွေစားသင့်တဲ့ အစားအစာ (၁၀)မျိုး
ပရိုမိုရှင်းတွေကို အချိန်မှီ ရယူကြပါစို့
November Skincare Promotion 🎉🎉
Eliza March Promotions!!!🎉🎉🎉
Eliza February Promotions!!!🎉🎉🎉
☃️ Winter Welcome Promotion !!! ☃️
Eliza November Promotions!!!
Birthday Month Promotion
Skincare with BFF “Come3Pay2Promotion”
Gym ကစားခြင်းကြောင့်ရရှိမည့် ကောင်းကျိုးများ
Spa သွားခြင်းကြောင့်ရရှိမည့် ကောင်းကျိုးများ
Gyms in Yangon
Spas in Yangon
Hair Saloon in Yangon
Acne-Care Facial Treatment
Beauty Aesthetic Clinics in Yangon
Thread Lift Nose
© 2019-2022 Your Fitster (Health & Beauty) Web Portal & Mobile App.
Your Fitster - Mobile App အား ရယူလိုက်ပါ